shwezinu: ပတ္တမြားခင် ၏ အတိတ်လမ်း ကိုပြန်လျှောက်ခြင်း, အပိုင်း (၉)
ပတ္တမြားခင် ၏ အတိတ်လမ်း ကိုပြန်လျှောက်ခြင်း, အပိုင်း (၉)
လေးငါးရက် ကြာတဲ့အထိ ကျွန်မတို့က ပြန်မရောက်တော့ ဗုံးထဲပါသွားတာ သေချာပါပြီ ဆိုပြီး စိတ်အားလည်းငယ်၊ ဦးအောင်ခန့် ကိုလည်း အားနာတာနဲ့ ကျွန်မတို့ နေရာရှာပြီး ပြောင်းပေးပါမယ်၊ အချိန်လေး ဘာလေးတော့ ပေးပါ လို့ တောင်းပန်ပြီး အန်တီလေးတို့ နေရာထွက်ရှာကြရတယ်တဲ့လေ။
မန္တလေးတစ်မြို့လုံး ကျွတ်နီးပါး မီးလောင်တာမို့ ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက နေရာအနှံ့မှာ ၀င်ပြီးခိုကြ ရတာ ဖြစ်တော့ အန်တီလေးတို့လည်း နေစရာ ဇရပ်ရှာလို့မရ ဖြစ်ပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့ အချိန်မှာမှ ကျွန်မတို့က တစ်အုပ်ကြီး ပြန်ရောက်လာကြတာပါ။ ကို ဆက်ဖတ်ရန် ........
ကျွန်မကို မြင်တော့ အန်တီလေးက ၀မ်းသာလွန်းလို့ ဖက်ပြီးတောင် ငိုရှာပါတယ်။ အကုန်လုံးကလည်း ၀မ်းသာ အယ်လဲ ဆီးကြိုကြတာပေါ့။ တစ်ခါတည်း 'သေရွာပြန် ခင်မကြီး' ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကို ရသွားတာပါပဲ။
မနက်လင်းတော့ ဇရပ်ရှင် ဦးအောင်ခန့်ဆိုတာ တောင်ဘက်ဇရပ်ကနေ ကူးလာပါပေါ့။ ကျွန်မတို့ အားလုံး မြင်းမူဘက်က တောရွာမှာ သွားခိုဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြန်လာတာမို့ အန်ကယ် ရဲ့ဇရပ် ကို ပြန်လာနေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲ အန်တီလေးတို့ လိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်ချိန် ပေးပါ' လို့။
အဲဒီတော့မှ ပြဿနာက တက်တော့တာပဲ။ ဦးအောင်ခန့် က .. 'ဟာ...မြင်းမူဘက်က တောရွာတွေဆိုတာ သိပ် ဆိုး တာ၊ ခုလိုမင်းမဲ့ချိန် ဘယ်တောရွာသွားသွား လုံခြုံတာမဟုတ် ဘူး။ မှားမှာပေါ့။ တောမှာက ဓားပြတိုက် အဓမ္မကျင့်ရုံ မကဘူး။ လူပါ သတ်တာနော်၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးက သူတော်စင်တွေရဲ့နေရာ၊ ဒါမျိုးမရှိဘူး။ ဒီမှာမှ လုံခြုံမှု ရှိတာ။ စိတ်ကူး မလွဲနဲ့၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှာပဲ စစ်အေးတဲ့ထိ နေဖို့ ကောင်းတယ်' တဲ့လေ။
ဦးလေး ဦးဖိုးအောင်ကလည်း ရဲအရာ မဟုတ်လား။ 'ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ရဲဘက် လုပ်လာတာပဲ သိ တာပေါ့၊ မင်းမဲ့ချိန်မှာ စိတ်ချရတာ မဟုတ်ဘူး။ တောကြောင်တွေ အခွင့် သာတုန်းထကြတာ။ ဒီမှာက ဘေးကင်း တယ်။ ငါ့တူမ လိုက်သွားလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ၊ ဦးလေးတုိ့လည်း မလိုက်နိုင်ဘူး။ မမြသန်း မွေးဖွားဖို့က ရှိသေးတော့ မန္တလေး နဲ့ အနီးဆုံး နေရာက ခွာလို့မဖြစ်ဘူး။ စစ်အေးတယ်ဆို မန္တလေးပြန်ရမှာ'တဲ့။ ဦးအောင်ခန့်ကို ၀င်ပြီး ထောက်ခံနေလေရဲ့။
'ဒါဆိုရင်လည်း ဦးလေး နဲ့ အန်တီလေးတုိ့ နေခဲ့ပေါ့။ ခင်မကြီးတို့တော့ Kathleen တို့နဲ့ လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားပြီးသား' လို့ ကျွန်မကလည်း ခေါင်းမာမာနဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို မပြင်ဘဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။
'ဒီမိန်းကလေး အလျင်စလို မဆုံးဖြတ်နဲ့လေ၊ ဒါက သေရေးရှင်ရေးကိစ္စ။ မင်းဦးလေးရဲ့ ပြောစကားကို နားထောင် မှပေါ့။ တောမှာ ကြုံရမယ့် အန္တရာယ်က များပါဘိနဲ့။ မင်းက ငယ်ငယ်၊ ရုပ်ရည်သနားကမားလေး၊ မိသားစု လူကြီးတွေ နဲ့ အတူနေသင့်တာ။ မင်းအဒေါ် ကလည်းမွေးဖွားခါနီး၊ တခြားဇရပ်လည်းနေဖို့ သွားမရှာနဲ့။ ဒီမှာပဲ နေကြ။ အန်ကယ် က တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကာယပဲ၊ ခေါင်းရင်းဇရပ်က ဆရာလေးတို့နဲ့ နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှ မပူ နဲ့။ တောကိုသွားဖုိ့ စိတ်မကူးနဲ့၊ မှားလိမ့်မယ်' တဲ့။
ဦးအောင်ခန့် က အဲလို ပြောတော့ အန်တီလေးက ကျွန်မမျက်နှာကို ကွက်ခနဲ လှမ်းကြည့်ပါ တယ်။ အဓိပ္ပာယ်က 'ဒီလူကြီး အချိုးပြောင်းတာ မြန်လှချေလား' ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပါ။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပါရဲ့။ ဗိုက်ကြီး တပြဲ နဲ့ မွေးခါနီး ဖြစ်နေ တာ ဒီကနေ့ကျမှပဲ သက်ညှာထောက်ထားရ ကောင်းမှန်းသိရတာတဲ့လား။
အဲဒီအတွေးနဲ့ အမြင်ကတ်သွားရတဲ့အထဲမှာ ကျွန်မတို့ အရေးအခင်းထဲ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ၀င်ပါရကောင်းလား နဲ့လည်း ခပ်ချဉ်ချဉ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ပေါင်းလိုက်တော့ ဒီလူကြီးကို ကျွန်မကြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။
ပြဿနာ က မပြီးဘူး။ အချေအတင်ပြောကြဆဲ။ အန်တီလေးကလည်း ဦးလေးအောင် ပြာသလိုပဲ မွေးဖွားဖို့ကိစ္စ ရှိတာမို့ တောဘက် မလိုက်လိုတာ အမှန်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မတို့ ၀တ္တရားရှိတဲ့အတိုင်း ခေါ်ပြီး မလိုက်ရင် လည်း ကျွန်မတို့ဘာသာ လိုက်သွားမယ်ပေါ့။ အဲလို တင်းမာနေဆဲ မာမီက ၀င်ပြောလိုက်ကာမှ အချေအတင် ကိစ္စ က ပြတ်သွားတော့တာပါ။
'ဟုတ်တယ်၊ မာမီတို့ မန္တလေး ပြန်ရဦးမှာ၊ မြင်းမူကို မလိုက်နိုင်ဘူး' 'စစ်အေးရင် မန္တလေး ပြန်မယ်' ဆိုတဲ့ ဦးလေးအောင် ရဲ့ စကားက မာမီရဲ့ခေါင်းထဲ ၀င်သွားလေသလား မသိပါဘူး။ 'မလိုက်ဘူး' ဆိုတဲ့ အဆုံးအဖြတ် ကို တစ်ခွန်းတည်း ပေးလိုက်တော့ ကျွန်မ လည်းဘာမှထပ်ပြီး မပြောသာတော့ဘူးပေါ့။ အစကတည်းကလည်း ကိုယ် တစ်ယောက် တည်းသဘောနဲ့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာ မဟုတ်လားနော်။ မာမီမပါဘဲနဲ့တော့ ဘယ်ခရီးကိုမှ မသွားနိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။
Kathleen တို့လည်း ကျွန်မတုိ့ မလိုက်ဖြစ်တော့ဘူး ဆိုတာ သေချာတာနဲ့ အဲဒီနေ့မှာပဲ မြင်းမူကို ထွက်ဖြစ် ပါတယ်။ သွားကြမယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတုိ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တစ်ယောက်လည်ပင်း တစ်ယောက်ဖက်ပြီး မျက်ရည် အရွှဲသားနဲ့ နှုတ်ဆက်စကား ဆိုကာ ရင်ထဲမှာ နာကျင်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ထိ ခံစားရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ခေမေသကချောင်မှာ ဆက်ပြီး နေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ မာမီရဲ့ အခြေအနေက တဖြည်း ဖြည်းတော့ ကောင်း လာပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သမျှ အရာရာကို လျှပ်တစ်ပြတ် အတွင်း ကုန်ဆုံး ပျောက်ကွယ်သွားတာကို မျက်စိအောက် မှာ မြင်လိုက်ရတာမို့ မဖြေနိုင်ဖြစ် နေတာကို နားလည်ခံစားမိပါတယ်။ အပျိုအရွယ် သမီးငယ် တစ်ယောက်နဲ့ ရှေ့ရေးကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာလည်း တွေးပြီး ပူရှာပေမှာပေါ့။
ကျွန်မ မှာလည်း စာအုပ်သေတ္တာထဲက စာအုပ်တွေနဲ့ ကင်မရာတစ်လုံးအပြင် ဓာတ်ပုံ Album ကလွဲပြီး ဘာမှ မည်မည် ရရ ကျန်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ အ၀တ်အစားက သေတ္တာ သေးသေးတစ်လုံးပဲပါလာတာ။ 'သိမ်းဟဲ့၊ သိမ်းဟဲ့' ဆိုတုန်း ကလည်း ကိုယ်တကယ် မက်မောတာပဲ သိမ်းလာခဲ့တာပေါ့။ ခုမှ ထိုင်နှမြောနေလည်း ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ကျွန်မကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ပျော်ပျော်ပဲလေ။ ငယ်သေးတော့ လည်း ရှေ့ရေးကိုတွေးပူရကောင်းမှန်းလည်း မသိပါဘူး။ မာမီနေကောင်းဖို့ တစ်ခုပဲ စိတ်ထဲမှာ ပူတာရှိပါတယ်။
ဦးအောင်ခန့် က နေ့စဉ်လို ကျွန်မတို့ ဇရပ်ကို ကူးလာပြီး ဦးဖိုးအောင်တို့၊ ဒေါ်ဒေါ်လုံးတို့နဲ့ အဖွဲ့ကျ လို့ပေါ့။ ကောက်ညှင်းပေါင်း ၀ယ်လာလိုက်၊ အကြော်တွေ ၀ယ်လာလိုက်နဲ့လည်း လောကွတ်တွေက ပါသေးတာ ပါ။ အန်တီလေးကလည်း ကျွန်မလိုပဲ သူ့ကိုကြည့်မရတဲ့ စာရင်းထဲမှာပါတော့ အရောတ၀င် မနေပါဘူး။ နဂိုကလည်း ခပ်အေးအေးဆိုတော့ သူ့ဘာသာ အနေများပါတယ်။
ကျွန်မက သူတကာ မိန်းကလေးလို ပိပိပြားပြား နေတတ်တဲ့ မိန်းမမှမဟုတ်တာ။ တစ်ခုခု လှုပ်ရှားပြီး လုပ်နေရမှ နေသာထိုင်သာ ရှိတာမို့ အနက်ဘက်ကျရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ဇရပ် အထက်ဘက်မှာရှိတဲ့ တစ်ကိုယ်စာ ကမ္မဌာန်းကျောင်း သေးသေးလေးမှာ တရားအားထုတ် နေတဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်ခေမာဆီမှာ သွားပြီး ဘုရားစာ တက်ပါတယ်။
နေ့ခင်းနေ့လယ် ကျရင်တော့ စိတ်လိုတဲ့အခါလည်း စာအုပ်သေတ္တာ ဖွင့်ပြီး စာတွေပြန်နွှေး ရင်းကျက်ပေ့ါ။ အဲလို မကျက်ချင်ရင်လည်း အောက်ဘက်ချောင်မှာ ရှိတဲ့ ဒေါ်ဒေါ်ငယ်ဆီက စာအုပ်တွေငှားပြီးဖတ်၊ ညနေကျတော့ တံမြက်စည်း တစ်ချောင်း၊ ဂေါ်ပြားတစ်ခုနဲ့ တောင်ပေါ်က လွမ်းစေတီပေါ် တက်ပြီးတံမြက်စည်းလှည်းရင်း ဟိုငေး ဒီငေး တစ်ယောက် တည်းထိုင်ငေးရင်း အတွေးပေါင်းစုံနေအောင် တွေးပေါ့။
"လွမ်းစေတီ"ဆိုတာ တကယ်ကို နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်ကို လွမ်းစရာကောင်းတဲ့ နေရာလေးမှာ တည်ထားတဲ့ ဘုရားပါ။ တောင်ထိပ် ဘုရားပရိဝုဏ်ကနေ မျှော်ကြည့်ရင်အောက်က တောင်စောင်း မှာတည်ထားတဲ့ ဘုရားဂူ၊ ကျောင်းကန် တန်ဆောင်း အသွယ်သွယ်ကို အပေါ်စီးကနေ မြင်ရတာ။ ရှင်ပင်နံကိုင်းဘုရားထိပါပဲ။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ကို မြွေကြီးတစ်ကောင်ကို တောင်အောက်မှာ စင်းစင်း ကြီးတွေ့ရတဲ့ အပြင် မြစ်လယ်ကြောမှာ မျောနေတဲ့ပိန်းကောလှေကြီးတွေ၊ သစ်ဖောင်တွေ၊ ရွက် လှေတွေ၊ ငှက်လို့ခေါ် တဲ့ လှေကလေးတွေ ရေစုန် ရေဆန်မှု လူးလားသွားနေတာကိုလည်း မြင်နိုင် ပါတယ်။
ညနေမှာ အိပ်တန်းတက်ဖို့ ပြန်လာကြတဲ့ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ အုပ်စုလိုက် ညီညီညာညာတောင် ပံခတ် လာတာကလည်း ကောင်းကင် ပြာပြာနောက်ခံနဲ့ ပနံရလှပါဘိ။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ကို ကျော် ပြီး မျှော်ကြည့် လိုက်ရင် ကျွန်မတို့ နေခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့ကို လှမ်းမြင်ရတာ ဟိုးမြောက်ဘက်မှာ မန္တလေးတောင် နဲ့ နန်းမြို့ရိုး အရှေ့ဘက် ကျတော့ မယ်ဥတောင်၊ ရန်ကင်းတောင်ကနေ ရှမ်းရိုးမ တောင်ကြီးထိ မျက်စိ တစ်ဆုံး မျှော်လို့မဆုံးပါပဲ။
ကျွန်မရဲ့အတွေးတွေကလည်း အစုံပေါ့။ အဲလို ကောင်းကင်ပြင် မြင်ကွင်းကျယ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး အတွေးတွေ တွေးခဲ့ရတာ။ ကျွန်မတို့ အိမ်နောက်က ဧကရာဇ်ပင်ရဲ့အောက် ၀ရန်တာပေါ်ကတည်း ကပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကိုယ်က ပက်လက်အိပ်ရင်းနဲ့ အပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတွေးခဲ့ ရတာ၊ ခုကျတော့ ကိုယ်က တောင်ထိပ်ကနေ အပေါ်စီးနဲ့ အောက်ကို ကြည့်ပြီး တွေးတာ၊ ဒါပဲ ကွာတာပါပဲ။
အဲလို အပြောကျယ်တဲ့ ကောင်းကင်ပြင်ကြီး ကြည့်ပြီးတွေးရတာ ကျွန်မအဖို့အားသစ်မာန်သစ်တွေ ရသလိုပဲ။ အဲဒီအင်အားတွေ ဟာ လွင့်နေတဲ့ တိမ်စတွေဆိကလား၊ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေခြင်း ဆီကလား၊ ဒါမှမဟုတ် တိုက်နေ တဲ့ လေပြည်လေးတွေထဲကလားဆိုတာလည်း လိုက်ရှာကြည့်မိ သေးတယ်။
အမှန် ကတော့ သဘာဝရဲ့ လှပခြင်းအားလုံးဆီက ရတာပဲဖြစ်မှာပါနော်။ အဲလိုပဲကိုယ့်ဟာကိုယ် အလှအပကို ရှာဖွေကြည့်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အားသစ်မာန်လောင်းရင်း အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံး အောင် ကြိုးစားရတာပေါ့။
တစ်ညနေ "လွမ်းစေတီ"ရှိရာ တောင်ထိပ်ကိုအသွား "Agnes!" ဟေ့ Agnes! လို့တောင်အောက် က လှမ်းခေါ်သံကြားတော့ ကျောင်းက တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီး ၀မ်းသာသွားတာပေါ့။ Agnes ဆိုတာ သူငယ်ချင်း ချင်းပဲ ခေါ်ကြတဲ့ နာမည်မဟုတ်လား။
ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်မနောက်ပြေးလိုက်လာပြီး ခေါ်သူက "ချာလီပန်းရီ"ဖြစ်နေပါရော။ သူ့အစ် "အင်မာပန်းရီ" "မေရီပန်းရီ"တို့က ကျွန်မထက်အတန်းကြီးပြီး ချာလီကတစ်တန်းငယ်ပါ တယ်။ စိန်ပီတာကို မပြောင်းခင် ကွန်ဗင့်မှာ အတူနေကြတုန်းက ချာလီက အေးအေးနွဲ့နွဲ့မို့ ကျွန်မ တို့ရဲ့ နိုင်ဖက်ကောင်လေးပေါ့။
ပြန်တွေ့ရတာ အံသြကြီးသင့်လို့ ၀မ်းလည်းသာ၊ ပျော်လည်းပျော်သွားတာပါပဲ။ "နင်ဘယ်သွားမ လို့လဲ"တဲ့။
ကျွန်မ က လွမ်းစေတီ မှာ နေ့တိုင်းတံမြက်စည်း သွားလှည်းတယ်ဆိုတော့ "ငါလည်းလိုက်မယ်"တဲ့ လေ။ အဲဒီနေ့ ကစပြီး ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ညနေတိုင်းလွမ်းစေတီတင်မကဘူး။ အဖော်ကောင်း တာနဲ့ အနားက ဘုရားတွေ၊ တန်ဆောင်းတွေကိုပါ အတူတံမြက်စည်းလှည်းကြပါတယ်။ မောပြီဆို ရင်တော့ လွမ်းစေတီ က ခုံတန်းလျားပေါ် ထိုင်ကြပြီးနားရင်း သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း၊ ဟိုအ ကြောင်း ဒီအကြောင်းပေါက်တတ် ကရတွေ ပြောကြ တာပေါ့။
တစ်ခါ တစ်ခါ မယောင်မလည်နဲ့ ကျွန်မတို့ရှိရာ ဦးအောင်ခန့် က ရောက်လာ တတ်ပါတယ်။ နောက် မှ ပြန်သိရတာက ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး တတွဲတွဲနဲ့ ဘုရားပေါ်မှာ မရိုးမသား ရှိနေ သလားအထင်နဲ့ လာပြီး အကဲခတ် တာတဲ့လေ။ ကျွန်မမှာ ရယ်လိုက်ရတာ။ ချာလီဆိုတာက အစ်မ တွေတစ်ပုံကြီးကြား မှာ မွေးလာတဲ့မောင်ငယ်လေး ဆိုတော့ ကနွဲ့ကလျနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကိုပေါင်းလိုက် ရသလို ပေါင်းရတာ မို့ လူတိုင်းက သူ့ကိုရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံပြီးချစ်ကြတာပါ။
ဒီလိုနဲ့ စစ်ပြေးဘ၀ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကုန်ဆုံးသွားတယ် ဆိုပေမဲ့ ချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့ ကောလဟလ သတင်းတွေ လည်း အမျိုးစုံ ကြားရ။ လူတွေမှာ ထိတ်လန့်တကြားနဲ ဘာဖြစ်မလဲဆို တာရင်မပြီး နေကြရတဲ့ကာလပေါ့။ ဆေးမရှိ၊ ဆရာဝန်မရှိ၊ ဆေးရုံမရှိတဲ့အချိန်မှာ ကိုလိုရာခေါ်တဲ့ ကာလ ၀မ်းရောဂါတွေဖြစ် လို့ သတိထားနေကြဆိုတဲ့ သတင်းစကားကလည်း လူတိုင်းရဲ့နားမှာ ရောက်လာပါတယ်။
တစ်နေ့ ကျွန်မတို့ ချောင်နဲ့ကပ်လျက်မှာနေတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ အစ်မ မီးဖွားဖို့နေ့စေ့ လစေ့ ဖြစ်နေတာကြောင့် ဆရာဝန်လိုက်ရှာတာလည်း မတွေ့၊ ၀မ်းဆွဲရှာတာလည်းမရလို့ စိတ်ပူပြီးနေကြ တယ်ဆို တဲ့ စကားကို ကြားတော့ အန်တီလေးမမြသန်းလည်း စိတ်ပူရှာတာပေါ့။ သူလည်းနောက် တစ်လနှစ်လ ဆိုမွေးတော့မှာ မဟုတ်လား။ စစ်ဆိုတာ တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာပါလားဆို တဲ့အသိတရား ကျွန်မခေါင်း ထဲမှာ ရောက်နေတာတော့မန္တလေး မီးလောင်ပြင်ထဲ ပြေးခဲ့ရတဲ့အချိန် ကစတာပါပဲ။
ခုလည်း အန်တီလေး မျက်စိမျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ အားငယ်နေရတာကို တွေ့ရတော့ အိမ်ရှေ့ပူ အိမ်နောက် မချမ်းသာ သလို ကျွန်မရင်မှာလည်း ကူးစက်ပြီး ခံစားရပါတယ်။ မာမီကလည်း ကောင်း တယ်သာဆိုတာ တစ်နေ့ရွှေ တစ်နေ့ငွေ။ ငိုချင်တဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်း ရှိုက်ကြီးတငင်ငို၊ ကြည်သာတဲ့အခါလည်း ကြည်သာ တယ်ပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ တစ်မနက် ကျွန်မသွားနေကျအတိုင်း ဘုရားစာ တက်ဖို့၊ ဆရာကြီးဒေါ်ခေမာရဲ့ ဇရပ် ကိုသွား ပါတယ်။ အ၀င်ဝ တံခါးပန်းပေါ်မှာ ခေါင်းတင်ပြီးလှဲလျက် ဆရာကြီးကိုတွေ့တော့ "ဒီနေရာ မှာဘာလို့ လာအိပ်နေပါ လိမ့်"ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဆရာကြီး နိုးမှာစိုးလို့ ခြေကိုဖွဖွနင်းပြီး အတွင်းကို ၀င်လိုက်ပါတယ်။
အိပ်နေ တဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ကလည်း တစ်မျိုးကြီး၊ လှဲအိပ်နေပုံကလည်း အထာတကျ မဟုတ်တာနဲ့ လက်မောင်း ကို သွားကိုင်ပြီး "ဆရာကြီး"လို့ သွားလှုပ်နှိုးဖို့ ကြံစည်ပြီး ကိုင်လိုက်မိ တာရေခဲတုံး လို အေးစက်နေတဲ့ အတွေ့ကိုရမှ ကျွန်မလန့်ဖျပ်သွားတော့တာပေါ့။
ဆရာကြီးဘေးမှာ ထိုင်ရာက ကပျာကယာထပြီး ပြေးထွက်လာတာ ဇရပ်ကို ရောက်တဲ့အထိ အသက်မှ ရှူဖြစ် ရဲ့လား မသိပါဘူး။ အန်တီလေးကို ပြောပြတော့ ဦးလေးအောင်က အနားမှာရှိတာ နဲ့ကျွန်မကို အလယ်ဇရပ်ကြီး က ချောင်အုပ်ချုပ်တဲ့ ဆရာကြီးကို မြန်မြန်သွားပြောချေ ဆိုတာနဲ့ အမောတကော သွားပြီး ပြောပြ ရပါသေးတယ်။
စိတ်ထဲမှာ လည်း အံ့သြလိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း။ မနေ့မနက်ကပဲ ကျွန်မကို ဘုရားစာချပေးနေခဲ့တာ အ ကောင်းသားကြီး ဆိုတော့ ယုံတောင် မယုံနိုင်ပါဘူး။ ဆရာကြီးကို လျှောက်ရင်းလည်း ကျွန်မငိုလိုက် ရတာ ရင်ထဲ မှာ နာကျင်ကြေမွလို့။ ဆရာကြီးက...
"ဒါလောက် မြန်တယ်ဆိုရင် ကာလ၀မ်းရောဂါပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်"ပြောလိုက်တော့ ကျွန်မပိုပြီး လန့် သွားတာပေါ့။ နောက် တစ်နေ့ကျတော့ ကျွန်မ ၀မ်းတွေ လျှောတော့တာပါပဲ။ ဆန်ဆေးရေ တွေလို ၀မ်းအဖြူတွေ သွားလိုက်တာ တစ်ရက်တည်းနဲ့ကို လူကမလှုပ်နိုင်တော့အောင် နုန်းခွေ သွားပါတယ်။
ဆရာကြီးဒေါ်ခေမာ လို ချက်ချင်းများ သေသွားမှာလားလို့ တွေးပြီးသွေးလန့်တာ လည်းပါတာကြောင့် စိတ်အားတွေ ငယ်နေ မိပါတယ်။ မာမီ စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့သာ ကိုယ့် ဟာကိုယ် အားတင်းပြီး ဟန်ဆောင် ထားရတာကလည်း ခံနေရတဲ့ရောဂါအပြင် ဒုက္ခတစ်ခု ပိုပါ သေးတယ်။
မာမီ လည်း စိတ်ပူပြီး ဦးလေးအောင်တို့ကို ဆရာဝန် လိုက်ရှာခိုင်းရတာပေါ့။ ဆရာဝန်ကလည်း ဘယ်မှာမှ ရှာမရပါဘူး။ ဒေါ်ခေမာ ဆီက ကျွန်မ ၀မ်းရောဂါ ကူးစက်လာပြီဆိုတာသိတော့ အန်တီ လေးတို့လည်း တုန်လှုပ်ချောက်ချား ကုန်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေက ငယ်ငယ်လေးတွေမို့ သူ တို့ကို ရောဂါ ကူးစက်ကုန်မှာ စိုးတာနဲ့ တခြားလွတ်ရာ ဘေးကင်ရာကို ချက်ချင်းပြောင်းနေဖို့ အားလုံးက ၀ိုင်းပြီး တိုက်တွန်းကြတာနဲ့ ချက်ချင်းကြီး ထပြောင်း သွား တာပေါ့။
ခေမေသက ရဲ့ ဟိုးမြောက်ဘက်ကျတဲ့ ရွှေဂူချောင်ဘက်မှာ နေရာရတယ်ဆိုလားပါပဲ။ အန်တီလေး တို့တင် မဟုတ်ပါဘူး။ ချောင်တွေထဲမှာ ၀မ်းရောဂါဖြစ်တဲ့ နေရာမှန်သမျှက လူတွေလည်းအဲလိုပဲ ကူးစက်မြန် တဲ့ ရောဂါဆိုးမို့ ဒီလိုကပ်နာမျိုးက လွတ်အောင်ပြေးကြရ၊ ရှောင်ကြရပါတယ်။ "နူရာဝဲစွဲ၊ လဲရာ သူခိုးထောင်း" ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပါပဲ။ စစ်ဘေးက ပြေးရင်းရောဂါနဲ့ ဆေးဝါးမရှိ လို့ သေကြရသူတွေလည်း အနန္တပါ။
ကျွန်မ ဘေးမှာလည်း မာမီနဲ့ ဘွားသီလရှင်ကြီးပဲ ရှိပါတော့တယ်။ တစ်ခု ကျွန်မ ကံကောင်းတာက မန္တလေးမှ နေစဉ်ကာလက မာမီက ပရဟိတ ဝါသနာပါသူမို့ Red Cross ကြက်ခြေနီအသင်းမှာ တပ်မှူးအဖြစ် ပါဝင်လှုပ်ရှား လာသူ တစ်ဦးပါ။ အဲဒီတုန်းက ဥက္ကဌက ဦးလှကြီးပေါ့။ဒီလို အခြေခံတွေ ရှိထားတာ မို့ ရှေ့ဦးသူနာပြုကျွမ်းတဲ့ မာမီက ကျွန်မကို အိမ်မှာ ရှိသမျှ၊ ဆေးလေးနဲ့ပဲ ကြိုးစားပြီး မပြန့်ပွားအောင် ဂရုစိုက်ပြုစုပေး ပါတယ်။
ခေါင်းရင်းဇရပ် မှာ နေတဲ့ ဦးအောင်ခန့်ကလည်း သတင်းကြားတော့ လာကြည့်ပါတယ်။ မာမီ ပြုစုနေ သမျှလောက်နဲ့တော့ စိတ်ချရမှာ မဟုတ်ဘူး။ တခြားချောင်တွေမှ ဆရာဝန် ရလိုရငြားဆိုပြီး လိုက်ရှာတော့ ဆရာဝန်တော့ တွေ့ခဲ့ပါရဲ့။
အဲဒီဆရာဝန်က မိသားစုရှိရာကို ခရီးဆက်မဲ့ဆဲဆဲမို့ လိုက်လာကြည့်ပေးဖို့ အချိန် မရတော့ဘူး။ ဆေး ပဲ ပေးလိုက် မယ် ဆိုတာနဲ့ ဆေးတော့ ရလာခဲ့တယ်ဆိုပြီး လာပေး ပါတယ်။ သေကံမရောက်လို့ပဲ ထင်ပါရဲ့။ အဲဒီဆေး နဲ့ ကျွန်မရဲ့ဝမ်းလျှောတာ သက်သာသွားပါတယ်။ လူက တော့မထူနိုင် မထောင်နိုင် အိပ်ရာထဲ လဲလျက် ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
မထနိုင် လို့ ပက်လက်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ဧပြီလ ၃၀ ရက် အိပ်မပျော်ညမှာ 'ဝုန်းဒိုင်း'ဆိုတဲ့ ဧရာမပေါက်ကွဲသံကြီးကို အနား မှာ ကပ်ပြီး ကြားလိုက်တော့ လာပြန်ပြီ၊ ဗုံးတွေပဲလို့ အထင်ရောက်ပြီး ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ သားအမိနှစ်ယောက် တအား ဖက်ထားရာက နေပြီး ရသမျှ ဘုရားစာတွေကို မပြတ်ရွတ်ရင်း မထနိုင်တာနဲ့ ဘုရား ကိုပဲ တ နေတာပေ့ါ။
မနက်ကျမှ သိရတာက ဂျပန်စစ်တပ်တွေက အောင်ပွဲရပြီး ချီတက်လာတာ နီးကပ်နေတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ် က နောက်ဆုတ်ရင်းနဲ့ ရန်သူတွေ အလွယ်တကူ မသုံးနိုင်အောင် စစ်ကိုင်း တံတားကြီး ကို ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားရပါတယ်။
အဲဒီထက်ဆိုး တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းတစ်ခုတော့ ကျွန်မကို အလွန်အမင်း တုန်လှုပ်ချောက် ချားစေခြင်း ဖြစ်တဲ့အထိပါပဲ။ ကျွန်မတို့နဲ့ ကပ်လျက်ချောင်က ကိုယ်ဝန် နေ့စေ့လစေ့နဲ့ မမအေမီ က မွေးဖွားချိန်တန် လို့ ကမ္မဇလေ လှုပ်ရှားပါတယ်တဲ့။ ဆရာဝန် ဆရာမရှာမရလို့ စစ်ကိုင်း အနီးအနားက ရွာတစ်ခု က လက်သည်ဝမ်းဆွဲကို သွားခေါ်ထားပါတယ်။
တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး မီးမဖွားနိုင်ရှာဘူး။ မမအေမီရဲ့ မီးဖွားရာလမ်းကြောင်း၊ ညှပ်ရိုးက ကျဉ်းနေလို့ ဒါမျိုးက ရိုးရိုး လက်သည်နှင့် ဖွားလို့မရဘဲ ဆေးရုံမှာ ဗိုက်ခွဲပြီး မွေးရမဲ့အဖြစ် ဆိုတော့ ပို့စရာ ဆေးရုံကလည်းမရှိ။ ဒီအထဲ စစ်ကိုင်း တံတားကြီး ဖောက်ခွဲသံနဲ့ ညက ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကြရတာပေါ့။ ပေါင်းလိုက်ပြီး မနက် မိုးလင်းတော့ မမအေမီရော၊ ကလေး ပါ ဆုံးသွားတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။
'နေ့မြင် ညပျောက်'ဆိုတဲ့ သင်္ခါရသဘောကို စစ်အတွင်းမှာတော့ ဖောဖောသီသီကြီးကို ကြုံတွေ့နေရခြင်းပါပဲ။ ဒီသတင်း ကို ကြားတော့ အန်တီလေးမမြသန်းအတွက်လည်း စိတ်ပူမိတာပေါ့။ နောက်တစ်နေ့ မေလဆန်း တစ်ရက်နေ့ မှာ ဂျပန်စစ်တပ်က မန္တလေးမြို့ကြီးကို အောင်မြင်စွာ သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဦးလေးဦးဖိုးအောင် တစ်ဦးတည်း ပြန်လာပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေ သိမ်းပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ကို ဂျပန်က သိမ်း လိုက်ပြီဆိုတော့ သူတို့ ဝါးချက်ရွာကနေ စောင့်ပြီး သတင်းနားထောင်ရင်း မန္တလေး အခြေအနေကောင်း တာနဲ့ ပြန်ကူးကြမယ်တဲ့။ ကျွန်မတို့ တစ်ခါတည်းလိုက်ရင် လိုက်ခဲ့လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်မ က ကောင်းကောင်းမရှိသေးတာနဲ့ သုံးလေးရက် စောင့်ပြီးမှ ဝါးချက်ကို လိုက်လာခဲ့မယ်ပေါ့။ ပြီးမှ အခြေအနေ ကြည့်ပြီး မန္တလေး ကို အတူကူးကြမယ်လို့ မာမီက စီစဉ်ပြီး ဦးလေးအောင်တို့ ရှိမယ့် နေရပ်လိပ်စာ ကို ယူထားလိုက်ပါတယ်။
သုံးလေးရက် ရှိတော့ ကျွန်မလည်း တော်တော်လေး အားပြည့်လာပါပြီ။ ကျွန်မတို့ ဝါးချက်လိုက်သွားပြီး မန္တလေး ကို ကူးမယ်ဆိုတာ ကြားတော့ဦးအောင်ခန့်က မသွားသင့်ဘူး။ အခြေအနေကို အချိန် ယူပြီး စောင့်ကြည့်စေ ချင်သေးတယ်။ စစ်ဦးဘီလူး ဆိုတာ စိတ်ချရသေးတဲ့ ကာလ မဟုတ်ဘူးနဲ့ ဖျက်ပါလေရော။
အဲဒါကို မာမီက လက်ခံစဉ်းစားချင်ပုံ ရပါတယ်။ ကျွန်မတော့ မန္တလေးကို ပြန်ရင် ဘိုးလေး တို့လည်း ပြန်ရောက်ကြမလားမသိ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်မတို့ အရင်အခြေအနေအတိုင်း တစုတစည်းနဲ့ ပြန်စရတာ လွယ်လေ မလားလုိ့ ဘွားလေးတို့ကို အားကိုးစိတ်နဲ့ ပြန်ချင်တယ်ပေါ့။
မာမီနဲ့ ကျွန်မ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြဿနာဖြစ်ကြပါရော။ ငယ်ကတည်းက မာမီကို ကြောက်ရတာမို့ မာမီရဲ့ အဆုံးအဖြတ် မှန်သမျှ နာခံလိုက်နာခဲ့ရတာ။ ဒီအကြိမ်မှာ ကျွန်မရဲ့ ဆန္ဒကို ထုတ်ပြော မိတော့ ပြဿနာဖြစ်ရတော့တာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ မာမီက ကျွန်မရဲ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောပြီး ဝါးချက်ကို လိုက်သွား ဖို့ သဘောတူတာနဲ့ မြစ်ဆိပ်ကို ဆင်းရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က ခုခေတ်မှာလို တောင်ရိုးတစ်လျှောက် ကားလမ်းပေါက်သေးတာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်နေရာ နဲ့ တစ်နေရာ အသွားအလာ အဆက်အသွယ် အလွန်ကို ခက်ခဲပါတယ်။ ခြေကျင်လျှောက်ရင်လျှောက် ဒါမဟုတ် ကုန်းလမ်း က ဆိုရင် နွားလှည်းကို ငှားပြီး သွားရင်သွား၊ ရေလမ်းကို ရွေးရင်လည်း ငှက်ဆိုတဲ့ သမ္ဗာန်သေးသေးလေးတွေ နဲ့ပဲ ဧရာဝတီမြစ်ကြောကို စုန်ဆန်ရတာပါ။
မြစ်ဆိပ် ကို ဘွားသီလရှင်ကြီးက လိုက်ပို့ပါတယ်။ မာမီကလည်း ရေကို အသေကြောက်တတ်တာ။ ငှားထားတဲ့ ငှက်ဆို တဲ့ သမ္ဗာန်လေးကလည်း သေးသေးလေး။ ကျွန်မရဲ့ စာအုပ်သေတ္တာလေးလေးကြီးကိုတင်လိုက်တော့ ငှက် က လူးသွားတာပေါ့။
ဒီမှာတင် မာမီက ကျွန်မကို အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်တော့တာပဲ။ စာအုပ်သေတ္တာကြီးပါရင် သူမလိုက်ဘူး တဲ့လေ။ ကျွန်မကိုလည်း နင်ကြိုက်ရာရွေးတဲ့ ကျွန်မမှာ မာမီလည်း လိုက်စေချင်၊ စာအုပ်
သေတ္တာကြီး လည်း အတူယူသွားချင်နဲ့ ဗျာတွေများပြီး ငိုချလိုက်တာပေါ့။
ပါလာတဲ့ ဘွားသီလရှင်ကြီး က ကျွန်မကို ကြည့်ပြီး သနားသွားတယ် ထင်ပါရဲ့။
'မိန်းကလေး ငိုမနေနဲ့။ စာအုပ်သေတ္တာကို ထားခဲ့ပြီး လိုက်သွား၊ အဘွားနောက်နေ့ကျတော့ နွားလှည်းငှားပြီး ဝါးချက်ကျောင်း ကို လာပို့ပေးမယ်တဲ့ ၊ ပြောရှာတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်းစာအုပ် သေတ္တာကြီးကို အားကလည်း မရှိ၊ မနိုင်မနင်းနဲ့ မနည်းပြန်ချပြီး ထားခဲ့တာပေါ့။'
မာမီ က ကျွန်မကို မျက်စောင်းအခဲသားနဲ့ ကြည့်ပြီး လိုက်လာပါတယ်။ အန်ကယ်အေးလာခေါ်တုန်းက မန္တလေးအိမ် က အထွက် စာအုပ်သေတ္တာကြီး သယ်လာမယ် ဆိုကတည်းက မာမီက ဝန်ကျယ်ပြီးလေးတာမို့ မယူခဲ့ ရဘူး ပြော ရက်သားနဲ့ ကျွန်မက မာမီအလစ်မှာ အန်ကယ်အေးကို ပြောပြီး တင်လာခဲ့တာဆိုတော့ အဲဒီကတည်း က ဒီစာအုပ်သေတ္တာနဲ့ ကျွန်မကို ကြည့်မရဖြစ်နေတာ ကြာပြီလေ။
ကိုယ့် အပြစ်နဲ့ကိုယ် ဆိုတော့ ကျွန်မလည်း ကုပ်ပြီးလိုက်ခဲ့ရတာပေါ့။ အန်တီလေးတို့ ပေးထားတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း ဝါးချက် က ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တော့ ရောက်ပါရဲ့။ ကျွန်မတို့ကို အန်တီလေး တို့က စောင့်နေခဲ့တာပါပဲ။
မနက်စောကြီး က လူကြုံကောင်းလို့တဲ့။ မန္တလေးကို ကူးသွားကြပြီဆိုတာ မှာထားခဲ့လို့ သိရတော့ အမော ကြီး မော သွားတာပေါ့။
မျှော်လင့် အားခဲထားသမျှတွေလည်း အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာနဲ့ တစ်စစီ ဖြစ်သွားသလို ရင်ထဲမှာ ခံစားလိုက် မိပါတယ်။ စစ်အတွင်းမှာ အရာရာက အခြေအနေကို လိုက်ပြီးလှုပ်ရှားရပ်တည် ကြရတာဖြစ်လို့ အန်တီလေး တို့ကိုလည်း အပြစ်မဆိုသာပါဘူး။ မွေးဖွားဖို့ကိစ္စက နံပါတ်တစ်ထားပြီး စဉ်းစားရတာကြောင့် အဆင်ပြေတဲ့ အခိုက် ကို လိုက်ပြီးသွားရတာ ဖြစ်မှာပဲလို့တွေးပြီး စိတ်သက်သာရာ ရှာရပါတယ်။
ဘဝ ရဲ့ တစ်ဆစ်ချိုး လမ်းကွေ့တွေကလည်း ဝင်္ကပါလို အသွယ်သွယ်နဲ့ မျက်စိလည်လမ်းမှား ချင်စရာ အခြေအနေ တစ်ခု ကို ရင်ဆိုင်လိုက်ရခြင်းပါပဲ။
Posted by SHWE ZIN U at 10:57 AM